हवाइजहाजको भाडा घट्यो,हेर्नुहोस् कुन ठाउको कति पुग्यो ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
हवाइजहाजको भाडा घट्यो,हेर्नुहोस् कुन ठाउको कति पुग्यो ?
काठमाडौँ – आन्तरिक उडानका वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले हवाई यात्रुको सहजता र राहतका लागि अधिकतम भाडादार घटाएको घोषणा गरेका छन् । निजी क्षेत्रको अग्रणी वायुसेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयर, श्री एयरलाइन्स, यती एयरलाइन्स, श्री एयरलाइन्सलगायतले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकालेर नयाँ भाडादर सार्वजनिक गरेका हुन् ।
त्यस्तै नेपालगञ्जका लागि रु छ हजार ३०० कायम भएको छ भने पहिला रु १० हजार ६२० थियो । धनगढीको रु १४ हजार १२४ रहेकामा अहिले रु सात हजार ९०० बनाइएको छ । पोखराको रु पाँच हजार २७२ रहेकामा नयाँ भाडादर तीन हजार ७०० कायम गरिएको छ । भैरहवाको पहिला रु छ हजार ७८१ रहेकामा अहिले रु चार हजार ९०० कायम गरिएको छ ।
साविक रु छ हजार ५४० भाडादर रहेको राजविराजको रु चार हजार २०० निर्धारण गरिएको बुद्धएयरले जनाएको छ । यो भाडादर लामोदूरीको बस सञ्चालनरुपले सञ्चालन नहुँदासम्म लागू गरिने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्ने उपाय अपनाउँदै बुद्धले काठमाडौँलगायत सबै स्टेशनबाट यात्रुको तापक्रम मापन, १०० भन्दाबढी तापक्रमका यात्रुलाई सुरक्षित साथ अफलोड तथा भाडा फिर्ता गरिँदै आएको जनाएको छ ।
उहाँले तीन गन्तव्य भरतपुर, जनकपुर र सिमराबाहेकका सबै गन्तव्यमा यस्तो छुटको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । श्रीले भद्रपुर रु सात हजार ४००, विटनगर रु छ हजार १००, जनकपुर रु तीन हजार ३००, सिमरा रु तीन हजार, पोखरा रु तीन हजार ७००, भैरहवा रु चार हजार ९००, नेपालगञ्ज छ हजार २०० र धनगढीमा रु सात हजार ९०० कायम गरेको छ ।